Faritra Betsiboka : Mandohalika, tsy afaka mamoaka vola ireo mpitantana
mercredi, 13 octobre 2021 11:59
Nesorina ny Lehiben'ny Faritra, nefa tsy nisy Governora nasolo azy efa roa taona mahery izao. Notendrena vonjimaika ny misolo toerana ny lehiben'ny Faritra, nefa tsy mahazo alalana hamoaka volam-panjakana ankoatran'ny karaman'ny mpiasa, ny karaman'ny sefo fokontany sy izay kojakoja mifanentana amin'izay, ary ny fanefana ny Jirama.
Tapitra notetezina avokoa ireo mpivarotra sy mpandraharaha afaka nitrosana entana sy kojakoja ampandehanan-draharaha eo an-toerana, fa efa tsy misy manaiky hakana entana trosaina avokoa.
Mandohalika ny fitantanana ny Faritra Betsiboka izay atao an-kilabao, ka ny vola ampaosin'ireo mpitantan-draharaha no misy mivoaka, izay mitarika korontana any an-tokantrano mihitsy, no tsy natao hiantoka ny lany ampandehanana ny faritra.
Manam-bola 6 miliara ariary anefa ny faritra any amin'ny Tahirim-bolam-panjakana, raha 454 tapitrisa ariary fotsiny no azo nolaniana ny taona 2020.
Nisy ny famatsiana FDL (Fonds de Développement Local) 2 miliara ariary, fa tsy afaka manao sonia an'io fifanarahana io ny lehiben'ny Faritra vonjimaika.
Andrasana fatratra izany ny fanendrena ny Governoran'i Betsiboka, fa sady efa tsy misy vola ampiasaina, no tara amin'ny famatsiana ny fampandehan-draharaha sy fanaovana fotodrafitrasa efa azon'ireo faritra hafa.